Vidio: Etu esi ebipụta Blog gị na Twitter | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 26, 2009 Sunday, July 27, 2014 Douglas Karr
Emechara m vidio a n'abalị ụnyaahụ iji nye ndị ahịa anyị Ntuziaka maka otu esi ebipụta blọọgụ ha na Twitter via Ikwusa ozi na ndepụta RSS. Ọ metụtara na ngwa ọ bụla nwere ndepụta RSS, yabụ chere na m ga-ekekọrịta ya ebe a!
Tags: nri na-elekọta mmadụna-eri nri na twitter@IGIHEwordpress na-elekọta mmadụWordPress ka twitter
Feb 26, 2009 na 10:33 PM
Twitter bụ ọ bụghị RSS!
Feb 26, 2009 na 11:07 PM
Amachaghị m ihe isi okwu gị, n'ezie Twitter abụghị RSS. Agbanyeghị, ibipụta site na RSS ruo Twitter bụ ụzọ dị irè iji na -ekwupụta blog gị (ma ọ bụ usoro ọzọ na - eji faili ntanetịime).
Feb 27, 2009 na 2:20 PM
Nsogbu m nwere bụ na ọ naghị eme m ihe ọ bụla baara m uru. Ọ bụrụ na m chọrọ ịma mgbe ị biputere ihe na blọọgụ gị, m ga-edebanye aha na ndepụta RSS. Ọ bụ ezie na ọ na - aza ajụjụ a "Gịnị ka m na - eme?", Azịza nke "ka ezitere X na blọọgụ m" nwere ike ịza nke ọma n'ụzọ ndị ọzọ.
Ọ naghị efunahụ m n'ụzọ ahụ mmadụ ole na ole na-eji RSS, yana ị ga-erute ndị ahụ jiri Twitter mana ọ bụghị RSS site na iji twitterfeed. Mana Twitter abughi ihe nchikota nri. Ọ bụrụ na mmadụ ga - eme nke a, ọ ga - amasị m karịa ka ha ga - enwe akaụntụ Twitter abụọ - otu nke mmadụ mepụtara naanị, na onye na - eme ihe nchịkọta site na igosi kwa RSS tweets ha na-akpaghị aka. Nke ahụ bụ ọtụtụ ọrụ na isi iyi isi, agbanyeghị.
N'ụzọ doro anya, ebe ọ bụ na nke a na-ewute m karịa ọtụtụ mmadụ, enwere m ike ịza nke a na njedebe m ma jiri onye ahịa Twitter na-ehichapụ tweets twitterfe, ma eleghị anya, ederede GreaseMonkey ime otu ihe ahụ na ntanetị Twitter.com.
Na nghọta zuru oke, agbanyeghị, okwu a bụ na iji twitterfeed na-akpaghị aka tweet post post na URL enweghị ọdịnaya, ọ bụ meta-data. Ọ ga-adị m mma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-ede nchịkọta Twitter ogologo nchịkọta nke blọgụ (ọ bụghị teaser ma ọ bụ naanị isiokwu ahụ), wee jikọọ post zuru ezu. Nke ahụ ga-abawanye uru, yana ihe m na-agaghị enweta site n'ịhụ aha post na onye na-agụ RSS.